I-part-time education education plumbing Ukushisa okuphakathi komplumberu ukufunda okubili
Ukushisa Okuphakathi - Isifaki se-Sanitary
Isisekelo saso sonke isakhiwo
Kuhlelo lokushisa oluphakathi uzofunda konke ngokushisa. Ufunda ukubeka amapayipi, ufunda ukuxhuma ama-boilers bese ufaka ama-radiators. Siphinde sikufundise ukusebenza ngokuzimela. Isifakisi sokushisa okuyisisekelo ngumsebenzi ofunwa kakhulu.
Sinikeza ukushisa okuphakathi nokuqeqeshwa kwamapayipi ngenqubo emibili. Ukufunda okubili kuyinkimbinkimbi yokufunda endaweni yokusebenzela nokufunda esikoleni.
Futhi uzokhokhwa izinsuku oqala ukusebenza ngazo.
Ngemuva kokuqeqeshwa kwakho ungahambisa ulwazi oluningi kumqashi wakho omusha.
Ukushisa okuphakathi nokusebenza kwamapayipi kukhona imisebenzi ye-bottleneck. Kunesidingo esikhulu emakethe yezabasebenzi kanti izinkokhelo ziphakeme.
Ufunda ohlelweni ukushisa okuphakathi nakho konke okuphathelene amapayipi. Usebenzisa kanjani amapayipayipi kagesi; indlela yokuxhuma amanzi namandla Siphinde sithole umsebenzi endaweni yokuhlanza noma endaweni yokushisa.
Ukuqeqeshwa ukushisa okuphakathi kanye neplumber kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Uqala endaweni yokushisa ephakathi.
Ngesitifiketi se ukushisa okuphakathi Uyaqiniseka ngomsebenzi?
Uma ufuna ukwenza ngokukhethekile, ungaqhubeka nokusebenza njengoba ipulazi.
Amapulangwe bakhathazeke kakhulu ngemakethe yomsebenzi.
Awudingi yiluphi ulwazi olukhethekile lwangaphambi kokuqeqeshwa okuhlanzekile / ukushisa.
Usebenza nesifaki sokushisa okuphakathi noma i-plumber. Ungase futhi usebenze njengomuntu oziqashile.
I-plumber iyimisebenzi yokubhoboza. Noma ubani ofuna ukwenza lo msebenzi futhi angenza kahle uqiniseke ngomsebenzi okhokhelwa kahle.
Ngokuvamile kune-plumbers ambalwa ngokujwayelekile. Ngakho-ke, kunomsebenzi omningi. Ikakhulukazi emisebenzini eyinkimbinkimbi noma ekhethekile kakhulu ayikho imincintiswano. NjengePlumber ungakwazi ngokukhethekile, kodwa futhi ukhule ngokubeka inkampani yakho siqu.
Ukufakelwa kwamaplangwe, kugcina futhi kulungiswa ukufakelwa ngamapayipi, njengezinhlelo zokushisa noma izakhiwo zangasese. Ukwenza lokhu, kumele aqale ukuhlola kahle isimo futhi alalele izimfuneko zamakhasimende. Izabelo zifaka kokubili ukufaka okukhulu kanye nokuhlanzwa kwesitsha esifihliwe. Uma kucacile ukuthi yini okudingeka yenziwe, i-Plumber ikhetha izinto ezifanele kanye nemishini yokusiza ukuba bahlangane.